အကောင်းဆုံး GNU / Linux ဖြန့်ချိမှု ၇ ခု | Linux မှ
အကောင်းဆုံး GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှု ၇ ခု
Linux.com တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ချစ်သောပင်ဂွင်းငှက်များကိုရည်စူးထားသောပေါ်တူဂီသည်မတူညီသောနယ်ပယ်များအရအကောင်းဆုံး Linux ဖြန့်ချိမှု ၇ ခုစာရင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံး Linux distros များ
အကောင်းဆုံး Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း: Ubuntu ကို
လက်တော့ပ်များအတွက်အကောင်းဆုံး Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း: တော့ openSUSE
ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးခြင်း: Novell SLED ဖြစ်သည်
အကောင်းဆုံးဆာဗာဖြန့်ဖြူးခြင်း: RHEL ဆာဗာ
အကောင်းဆုံး Linux LiveCD: KNOPPIX
လုံခြုံရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးခြင်း: ပြန်လာပြီ
အကောင်းဆုံးမာလ်တီမီဒီယာ Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း: Ubuntu ကိုစတူဒီယို
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဤအမျိုးအစားသည်အမြဲတမ်းသုံးစွဲသူများ၏ထင်မြင်ချက်နှင့် (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြန့်ဖြူးမှုများကိုမြည်းစမ်းရန်) သဘောထားကွဲလွဲလေ့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် Linux ကိုဘယ်တော့မှမသုံးဖူးတဲ့သုံးစွဲသူတွေအတွက်တော့သူတို့ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ဖတ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Linux.com ဆောင်းပါး သူတို့ရွေးချယ်မှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြရသော။
မြင်နေ | TuZonaWinLinux
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » အကောင်းဆုံး GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှု ၇ ခု
အကောင်းဆုံး Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း: Ubuntu <--- ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပိုကောင်းလဲ ??? မည်သည့်ကိစ္စတွင်ပိုမိုလူကြိုက်များ
Laptop များအတွက် Linux အတွက်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးခြင်း: openSUSE <--- ဟုတ်ကဲ့၊ acer တစ်ခုနှင့်ပြproblemsနာရှိသော်လည်း
ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးခြင်း: Novell SLED <--- ၎င်းကိုအဘယ်ကြောင့်သာထောက်ပံ့သည်။
အကောင်းဆုံးဆာဗာဖြန့်ဖြူးခြင်း: RHEL ဆာဗာ <--- ???
အကောင်းဆုံး Linux LiveCD: KNOPPIX <--- ၎င်းသည်မည်သည့်အရာကိုအခြေခံသနည်း။ ပထမ ဦး ဆုံးဟုတ်ကဲ့
အကောင်းဆုံးပစ်မှတ်ဖြန့်ဝေမှု - BackTrack <--- mmmm
အကောင်းဆုံးမာလ်တီမီဒီယာ Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း: Ubuntu Studio <--- ငါမစမ်းနိူင်ပါ
Javier အီး Sola ဟုသူကပြောသည်
NOvell SLED တွင်အထောက်အပံ့အပြင်ကုမ္ပဏီအတွက်စီစဉ်ထားသောအစီအစဉ်များ (ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေး၊ အုပ်စုလိုက်၊ citrix client နှင့်အခြားဆေးပင်များ) ရှိသည်။ ထို့အပြင်အရာအားလုံးသည် Active Directory သို့မဟုတ် LDAP ကို ​​thge box မှဝင်ရောက်ရန်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ နှင့်ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်စေသောအခြားအသေးစိတျ။
တကယ်တော့ငါကြိုးစားခဲ့သော distros များ၏, ငါ့အဘို့အ workstation များအတွက်ကအကောင်းဆုံး (ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်ဖြစ်ပါတယ်) ။
Javier E. Sola အားပြန်ကြားပါ
Linugux သုည ဟုသူကပြောသည်
Linugux Zero အားပြန်ပြောပါ
ငါ့အတွက်… Linux Mint, Arch, Debian, CrunchBang, ArchBang, Trisquel နှင့် Fedora ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလုံခြုံရေးအတွက်ရည်ရွယ်သည်အကောင်းဆုံး distro Bugtraq ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ထိုးဖောက်ခြင်းစမ်းသပ်မှုများဖြင့်ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီးအလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ လာစမ်းပါ၊ အများဆုံးပါ။
"Bugtraq မှာငါတို့ယုံကြည်တယ်" Ah, ငါမေ့သွားတယ်၊ မက်ဒရစ်မြို့ကယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကဒါကိုလုပ်ပြီးပြီ၊ အခုအချိန်မှာတော့သူကဘာသာစကား ၁၁ မျိုးနဲ့ရနိုင်တယ်။ Debian, Ubunto နဲ့ open SUSE ကိုအခြေခံပြီးရွေးလို့ရတယ်။
Bugtraq2သည် distros များ၏အနက်ရောင်မုဆိုးမဖြစ်သည် !!!!!!!!!!
Ubuntu ကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုငါ fedora ကိုကြိုးစားစားပြီးပြီ။
Arturo Santos သို့ပြန်သွားပါ
စာရေးသူများသည်အရသာနှင့်အရောင်များအကြောင်းရေးသားခြင်းမရှိသေးပါ။ gnu / linux distros တွင်ထိပ်ဆုံးစာရင်းဖြစ်သော၎င်းတို့အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မရေးထားပါ။
အပေါ်ကရေးသားချက်များကိုစမ်းသပ်ရန်အငြင်းပွားဖွယ်ရာများရှိနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အသုံးပြုသူအဆင့်တွင်အကောင်းဆုံး distro ကိုရွေးချယ်ရန်လွယ်ကူသည်။
၁ °ဗားရှင်းတစ်ခုကိုရွေးပြီးသင်၏ desktop သို့မဟုတ် laptop တွင်ထည့်သွင်းပါ
၂ °သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့် (သို့) အင်တာနက်ပေါ်ရှိထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ဖြင့်စားပွဲ (များ) ကိုရွေးချယ်ပါ။
4 °အချို့သော hard drives များကိုသင်တပ်ဆင်ပြီးပါကပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးပါကသင်အတွက်အကောင်းဆုံး distro သည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးအခြားသူများအားအကြံပြုရန်အဆင်ပြေသည်ဟုသင်ယူဆပါလိမ့်မည်။
5 °မင်းပျော်တယ် !! (:
Linux သုံးစွဲသူအဆင့် ၅ ဆင့်
ရရှိနိုင် Ailurus 10.2